Kuleylka ugu daran ee Shanghai muddo 145 sano ah wuxuu dilaa 4 | Saadaasha Shabakadda
Sawir - Xinhuanet.com
Xilliga xagaaga meelo badan oo adduunka ka mid ah meerkurida heerkulbeegga waxay u kacdaa qiime aad u sarreeya, laakiin marka kuleylka lagu daro heerarka sare ee wasakheynta, dareenka kuleylka ayaa ka sarreyn kara dhowr darajo.
Magaalada Shanghai (Shiinaha), waxay la kulmayaan kuleylkii ugu xumaa 145-kii sano ee la soo dhaafay. Heerkulka ugu sarreeya ee 40ºC, qoyaan badan iyo wasakhda, jidhku wuxuu leeyahay dareen ah 9ºC. Waxay ahayd mid aad u xun in 4 qof ayaa ku naf waayey.
El Talaado Magaalada ayaa soo saartay digniintii seddexaad ee casaanka sanadka sababo la xiriira heerkulka sare, maxaa yeelay heerkulbeegga ayaa gaaray 40,9ºC, sidaas ayeyna ku noqotay maalinta afraad ugu kulul tan iyo markii diiwaanka la bilaabay in la duubo, 145 sano ka hor. Kuleylka daran ayaa sababay khasaaro bini’aadam, sida uu qoray wargayska maxalliga ah Shanghai Daily.
Waqtigaan la joogo, waxaa la ogyahay in afar qof ay dhinteen, halka tobanaan ka mid ah, dadka waayeelka ah ee ku sugnaa wadada, guryahooda oo aan lahayn hawo qaboojiye, ama shaqeeya inta qorraxdu u socoto, isbitaal ayaa loo dhigaa istaroogga kuleylka ama cuduro kale.
Waana inay ku jirtaa qorrax buuxda iyadoo aan la ilaalin inta lagu jiro xagaaga, iyo gaar ahaan, inta lagu jiro a hirarka kuleylka, Waxay naga dhigi kartaa miyir beelid, oo waxaan xitaa lahaan karnaa wadnaha ama neefsashada oo shaqeysa, sambabada ama bararka maskaxda, iyo xitaa howl gabka xubnaha.
Si looga fogaado dhibaatooyinka, waxaa aad muhiim u ah in la qaado tallaabooyin taxane ah, kuwaas oo ah:
Iska ilaali inaad naftaada u dhigto qorraxda tooska ah xilliyada ugu kulul.
Ka ilaali naftaada falaaraha qorraxda adoo xiranaya koofiyad, muraayadaha indhaha, iyo muraayadda qorraxda.
Cab biyo badan, xitaa haddii aanaan harraad lahayn.
Laakiin marka lagu daro, waa inaan jooji kuleylka adduunka haddii aynaan rabin inay dad badani u dhintaan kulaylka jira awgood.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Mawjadaha kuleylka » Kuleylka ugu kulul ee Shanghai muddo 145 sano ah wuxuu dilaa 4
NASA waxay soo jeedineysaa qorshe hanweyn oo lagu ... Ka leexdo meterooyinka!